Abaningi abalimi-abalandeli ngokuphelele ungazi ukuthi yini okufanele uyenze lapho amahlamvu ayehla kusukela ficus. Onjalo state zonke izinhlobo. Ngaphambi kokuqhubeka isitshalo ukwelashwa, kubalulekile ukuthola izizathu ezaholela kuye kulesi simo.
The main kubangela leaf abscission e kwezinhlobo ezahlukene Ficus
Ngoba ekhaya kutshalwa izinhlobo eziningi izitshalo, isimo sabo bathonywe izinto ezahlukene. Akufanele sibakhohlwe ukuthi kwamacala amahlamvu ephansi kungokwemvelo ficus isihlahla lapho ekuthuthukisweni evamile nokukhula. Uma le nqubo kwenzeka ngokushesha kakhulu, ezithinta cishe lonke isitshalo kufanele kube ngokuphelele ukuqonda izimo yeziboshwa zakhe. Ngokuvamile okuvela emhlabathini amanzi emaqabungeni ficus ayehla. Nokho, angakwenza cishe "Bald." Kusukela ngokweqile umswakama ehlupheka kakhulu ficus Elastica. Naphezu kweqiniso lokuthi kuba bafune kwezimiso yeziboshwa, waterlogging nomthelela kuye ekushoneni.
Isimo siba esihlukile ne Ficus benjamina. Naphezu kokuhlukahluka izinhlobo zawo, bonke babo bayithusi izimo efunwa kakhulu yeziboshwa. Ngakho, ngo-amahlamvu komkhiwane abawayo, ngisho nalapho kokushintsha kwezimo yeziboshwa zakhe. Kulokhu, singakutholi ukukhanya kwelanga, okusalungiswa, izinga lokushisa ongaphakeme, ngokweqile noma yokudla enganele ngokuvamile liyochukuluza isimo simila. Vele zibulale kuye futhi transplanting njalo kuphazamisa ukuthuthukiswa evamile nokukhula. Ngokuvamile kuba ngemva kokuba abe ficus amahlamvu ayehla.
Cishe zonke izinhlobo izitshalo (ngaphandle amafomu ampelnyh) kufanele njalo utshalwe kabusha, ngoba isimiso sazo impande ikhula kunalokho ngokushesha futhi depletes inhlabathi. Cishe zonke izinhlobo amakhiwane asikubekezeleli ukushintsha indawo yabo, okuyinto futhi kuholela bephonsa amahlamvu. Ngokuvamile, le nqubo kuyobe kungakazukufika masinyane ngemva exchange of izitshalo, futhi ngemva kwesikhathi esithile.
Kungani amacembe awohloka ampelnyh amafomu
I kuzalwa lokuqala ukukhanya asanele noma ngokweqile ngezinye ampelnyh yakha ficus eshiya nezibazi. Zikhona nezinye izizathu Ukuwohloka izitshalo ezifana. Ukoma kwenhlabathi kanye nokuntuleka sishaye njalo kuphumela kwamacala amahlamvu.
Phuzi futhi awe amahlamvu
Ngezinye izikhathi abatshali ongenalwazi sebeqala ukukhathazeka, bengazi ukuthi uzizwa isihlahla-Ficus yabo. Amahlamvu phuzi futhi ewa enqubeni ekukhuleni kwesitshalo unaphakade. Le nqubo engokwemvelo yokufunda, njengoba umthetho, akufanele sikwethuse. Kuphela uma lokhu mkhuba osebenza ku amahlamvu amadala ephansi kuya abasha engenhla, kufanele ufune imbangela zinakekelwe okungalungile izitshalo.
Zonke izinhlobo amahlamvu ficus phuzi futhi ewa ukungondleki. Nge Ukuwohloka inhlabathi kumele njalo utshalwe izitshalo substrate entsha nokondla njalo.
Abanye abatshali uqaphele ukwenza yonke imithetho wokunakekela ficus yakho, kodwa umbala bamahlamvu awo futhi isibalo saso namanje ekushintsheni. Yini enye kungabangela isifo esibuhlungu? Ukuphendula umbuzo mayelana kungani amahlamvu ayehla kusukela ficus, akufanele sikhohlwe ukuthi kungenziwa ithole izinambuzane evamile ukuthi kanzima deplete simila. Ukuze ukuthola lezi izivakashi bengamenyiwe kudingeka ahlole ngokucophelela ficus, futhi ngemva kokumiswa zazo ukusebenzisa zinambuzane ezifanele ukubulala izinambuzane.
Ngokuvamile emaphethelweni amathiphu amaqabunga avele amnyama. Uma ungathathi izinyathelo esiphuthumayo, kungaba lula ukulahlekelwa ficus zakho ozithandayo. Ukungcolisa futhi amahlamvu ayehla at eliphezulu kakhulu izinga lokushisa, emoyeni elomile noma overfeeding isitshalo fertilizer. Ngokuvamile mnyama amahlamvu e nenkathi ebandayo, uma kukhona isidingo isikhala bafudumale. lokushisa Ukwandiswa futhi overdrying - isizathu esiyinhloko ukuthi umdlalo uqala ficus futhi azikhuli.
Blackening amaqabunga kungadalwa yilanga yabo. Ukubukeka amnyama kuyinto kunesidingo esiphuthumayo ukususa isitshalo ethunzini esinqunyiwe.
Blackening amaqabunga kubangelwa waterlogging nomhlabathi. Ngakho-ke kudingekile ukuba uhlole isimo yayo ngaphambi ukuchelela. Ukuze wenze lokhu, ungakwazi unamathele induku omile phansi kumuntu ka 3 cm ukujula. Uma, emva kokukhipha wakhe uhlala inhlabathi olumanzi, amanzi lesi sitshalo namanje hhayi zinkulu. Ukuba uhlelo oluhle amanzi futhi uyovikela isitshalo kusukela blackening amaqabunga.
Indlela ukusindisa ficus
amahlamvu Ukuwa lokhu zezimila kuvamile impela, nokuhambisana kuphela izimo ungase alondeke. Ngakho-ke, zonke amakhiwane lokushisa ezibalulekile. Ngesikhathi ubusika imvelo akufanele kube lalingu-12? C. izitshalo Tree-iraba uncamela izibani okuhle, kanye nezinye izinhlobo - umthunzi ngokwengxenye. Izindlela ezihlukahlukene zalesi sitshalo kukhona ukunisela ngezindlela ezahlukene. Ngakho, izitshalo ampelnye iraba efana ukuthambisa njalo, kodwa moisturize isihlahla kufanele kube ngemva kokuba inhlabathi seyomile. Kufanele kukhunjulwe ukuthi zonke izinhlobo izitshalo udinga moisten amanzi ezithambile emazingeni okushisa okuvamile. Ukunisela ebusika enciphile kancane.
Phakathi nezinyanga zasehlobo, izitshalo iraba kungenziwa bangeniswa emoyeni opholile. Ngesikhathi esifanayo kufanele afakwe umthunzi ngokwengxenye. Air umqhele lezi zitshalo kusheshe futhi kuluhlaza. Spring Ukufakelwa ukukhiqiza 1 isikhathi eminyakeni 2. ifomu Ampelnye 1 kungenziwa utshalwe njalo eminyakeni 3-4.
imikhiqizo yamakhemikhali lokwenza ngcono ficus
Ngaphezu izimbangela ka "impandla" ficus, ungasebenzisa amathuluzi akhethekile, has imiphumela ezuzisayo on izitshalo. Ngakho izikhathi eziningana olufuthwe nge Amalungiselelo "Appin" noma "Zircon", okuyinto zinhle kakhulu ukukhula abagqugquzeli. Okuphindaphindayo ukwelashwa ngezimpawu ezinjalo ezazisetshenziswa uvuselela ficus, futhi kuyoba amahlamvu abasha green.